Yoma Lan, Author at YomaLan
Author: Yoma Lan
April 20, 2018 Yoma Lan0 comment
ရှင်းရှင်းပဲပြောရအောင်… လူတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားကြတာပဲမလား ။ အမျိုးသားတွေကလည်း အမြဲတမ်းလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားတွေကို စိတ်ဝင်စားနေတာပဲဆိုတော့ …အခုအမျိုးသားတွေ သိချင်နေတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးထားပါတယ် ။ ၁. လှေကားပြေးတက် ပြေးဆင်းတဲ့အခါ အဆင်မပြေမဖြစ်ဘူးလား ဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်…ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အဆင်မပြေတာမျိုးမရှိပါဘူး ။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အောက်ခံအင်္ကျီအနေအထားမကျတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ ပြဿနာနဲနဲရှိတယ် ။ ရင်သားကြီးကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ပြေးဆင်းတဲ့အခါမှာ နဲနဲတော့ နာကျင်မှုရှိတာပေါ့ ။ ၂. ဘယ်လိုမျိုးအနေအထားမှာ အလှဆုံးလို့ပြောချင်လဲ ရင်သားအနေအထားဆိုတာကတော့ ဆံပင်လိုပါပဲ ။ နေသားကျနေတဲ့အခါမှာ ကြည့်ကောင်းတယ် ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် တီရှုပ်အောက်မှာ လှလှပပလေး အဝေ့အဝိုက်လေးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ ။ ၃. ရင်ဘတ်မလေးဘူးလား ဒီလိုတွေးတဲ့အတွက်တော့ အမျိုးသားတွေကိုအပစ်မတင်သင့်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရင်သားတွေက တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုပဲ..ဘယ်လိုမှကိုမခံစားရပါဘူး ။ ၄. Bra ဝတ်ရတာ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းလား အောက်ခံမှာ ကြိုးအမာပါတဲ့ Bra တွေဝတ်ရတာတော့သိပ်မဆိုးပါဘူး ။ တစ်နေကုန်ဝတ်ထားရတော့ ညဘက်ရောက်တဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာမရှိပဲယားယံလာတယ် ။ ဒီတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲထားချင်တာပေါ့ ။ ၅. အလုပ်လုပ်ရတာ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလား ဒါကတော့တုံးလွန်းသွားပြီ..သင်တို့ပေါင်ကြားကဟာကရော လမ်းလျောက်ရင်အနှောက်အယှက်ပေးလား ။ ရင်သားတွေဆိုတာကလည်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နားရွက်တို့နှာခေါင်းတို့နဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ၆. ဘယ်လောက်အတွေ့အထိခံစားနိုင်လဲ သင့်ဟာကို သင်တစ်ချက်လောက်ထိုးကြည့်လိုက်ပါလား…အဲ့ဒီခံစားမှုနဲ့ထပ်တူညီခံစားနိုင်တယ် ။ ၇. နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ…
ကောင်လေးရဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ ကလေးသုံးယောက်ကို တစ်ကိုယ်ထဲစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ရုရှားအမျိုးသမီးဟာ တစ်ညတာချစ်သူရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုသေးတယ်လို့ပြောပြီးလှောင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် တရားခံအမျိုးသားကတော့ သူ့လိင်အင်္ဂါကိုလှောင်ပြောင်တဲ့အတွက် သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပါတယ် Kovalenko ဟာ ဒီကောင်လေးနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံ Volgogard ရွာက ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ကောင်လေးဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကို အလည်လိုက်ဖို့ခေါ်ခဲ့တာပဲဆိုပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်အတူအိပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ် ။ Kovalenko ဟာ ချစ်တင်းနှောတဲ့နေရာမှာ သိပ်အလိုမပြည့်ခဲ့ဘူးထင်တယ် ။ သူဟာ ကောင်လေးရဲ့အင်္ဂါကိုသေးတယ်လို့လှောင်ပြောင်ခဲ့တယ် ။ တရားခံအပြောအရတော့ သူငှားနေတဲ့ ကားဂိုထောင်ဆီကို Kovalenko ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ သူတို့အတူအိပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ ။ နောက်တော့ Kovalenko ဟာ သူ့ရဲ့ အင်္ဂါကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာ လှောင်ပြောင်ရယ်မောခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ ဒီလူဟာ လူသတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတာမဟုတ်ပါဘူး…ကောင်မလေးက သူ့ဟာကို လှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒေါသမထိန်းနိုင်ပဲ ရှက်ပြီးရူးသွပ်သွားကာ သတ်ခဲ့မိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်လို့ ရဲတွေကပြောခဲ့ပါတယ် ။ တရားခံဟာ အမျိုးသမီးကိုလည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ တောထဲမှာ အလောင်းကိုမြှုပ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ် Kovalenko ပျောက်သွားတဲ့နောက် သူ့သူငယ်ချင်းတွေက လိုက်ရှာခဲ့ကြတယ် ။ ရဲတွေက သူနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့ လူကို ခြေရာခံနိုင်ခဲ့တယ် ။ ရဲတွေက ဒီလူကိုစစ်မေးတဲ့အခါမှာ Kovalenko နဲ့ဆိုင်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ သူ့အိမ်ပြန်သွားတယ်လို့ပဲ ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် CCTV စစ်ဆေးချက်တွေအရ နှစ်ယောက်လုံး ကားဂိုထောင်ဆီသွားခဲ့ကြတာကို တွေ့ရှိရတယ် ။ ထို့အပြင် Kovalenko ရဲ့အလောင်းကို…
Viagra တန်ခိုးနဲ့ အချစ်စွမ်းအား ၂ဆ တိုးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲ
ထိုအပြာရောင်ဆေးလုံးလေးတွေကို သင်မလိုဘူးဆိုရင်တောင် သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သင်သိဖို့မခက်ပါဘူး။ အကျိုးရလဒ်ကို သိသာစေဖို့ Ed Short နဲ့ သူ့ကောင်မလေး Jess Gladstone တို့ကို စမ်းသပ်စေခဲ့ပါတယ်။Ed Short ကတော့ ထိုဆေးဟာ အမျိုးသားအင်္ဂါထောင်မတ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပီး ဗြိတိန်အမျိုးသား ငါးယောက်မှာတစ်ယောက်ခံစားနေရတဲ့ လိင်တံပျော့ခွေခြင်း ပြသနာကို လေးလုံးကို ၁၉.၉၉ ပေါင်တန် ဆေးလုံးလေးတွေက ကုစားနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူက “ကျွန်တော့်အတွက်က ဒီဆေးတွေမလိုအပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကနဂိုတည်းက ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေကို ရရှိပီးဖြစ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ Ed ကဆေးစသုံးကြည့်ချင်တယ်လို့ ပြောလာချိန်မှာတော့ Jess ကဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ Ed ခံရမှာစိုးခဲ့ပါတယ်။ အံ့လည်းသြမိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့ Ed မှာ သူငယ်ပြန်တတ်တဲ့ရောဂါအခံရှိပီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆေးတွေမှီဝဲရပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကြောင့် သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြသွားတယ်လို့ကျွန်မ မထင်ပါဘူး။ ပုံမှန်ဆယ်မိနစ်လောက် ဆက်ဆံဖြစ်ပီး အရာရာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဆေးသုံးတော့မယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်မထင်တာက သူ့လိင်တံများပိုကြီးလာမလား? တခြားခံစားချက်တွေများဖြစ်လာလေမလားပေါ့။ဆေးမှီဝဲတဲ့ ပထမဆုံးည ညစာစားနေစဉ်ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ထင့်နေကြတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီလိုဆေးမျိုးတွေရဲ့ ဆိုးသတင်းတွေက မွှေးတယ်လေ။ နောက်စိတ်တစ်ခုကတော့ မင်္ဂလာဦးည အိပ်ရာထဲမ၀င်ခင်ခံစားမှုမျိုးပေါ့။ ညစာစားပီးပီးချင်း Ed တအားစိတ်ထက်သန်လာတယ်။ ဒါကတော့သိပ်မဆန်းပါဘူး။ Ed က ငထန်လေးတစ်ယောက်လေ။ ညစာစားရင်းသူ့ကို မေးကြည့်တယ်။ ဘယ်လိုစိတ်တွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေလဲ။ ပုံမှန်ပဲလားလို့ပေါ့။ ကျွန်မ အမြင်တော့ သူပိုပီး စိတ်အားထက်သန်နေပီး ကြာလည်းကြာတယ်။ ခုကြာတာမျိုးက နာရီပိုင်းအထိရှိလာပီး သူ့အတွက် ကော…
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အနှိပ်သည်အမျိုးသားတစ်ဦးက နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည် ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား နှိပ်နယ်ပေးစဉ် အဓ္ဓမပြုကျင့်မှုဖြင့် ထိုင်းရဲအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်နိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့လည်မှာရှိတဲ့ အနှိပ်ခန်းကို ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့က ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီးက သူ၏အဖော်တစ်ဦးနဲ့အတူ ရောက်လာခဲ့ပြီး အနှိပ်ခန်းမြေညီထပ်မှာ အတူတစ်ကွ ခြေထောက်နှိပ်နယ်မှု ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်ကိုယ်လုံးနှိပ်နယ်ရန် အပေါ်ထပ်ရှိ အခန်းတွင် သီခြားစီ နှိပ်နယ်ခံစဉ်တွင် နှိပ်တယ်ပေးသူက အမျိုးသမီးအား အဓ္ဓမပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ရဲကိုတိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြင်ပါတယ်။ ရဲအဖွဲ့က အနှိပ်သည်ကို လိုက်ရှာပြီး ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ အနှိပ်သည် အမျိုးသားရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ နှစ်ဦးသဘောတူဆန္ဒအလျောက် ချစ်တင်းနှောခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အားလုံးပြီးစီးပြီးနောက် အမျိုးသမီးမှာ အနှိပ်ခ ထိုင်းဘတ် ၂၀၀ ရှင်းခဲ့သည့်အပြင် သူ့အား ဘတ် ၁၀၀ ကို ဘောက်ဆူးအဖြစ် ပေးခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးက အနှိပ်သည်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ Facebook တွင် တင်ခဲ့သေးကြောင်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိမှာတော့ ရဲအဖွဲ့က ထိုင်ဝမ်အမျိုးသမီးအား ဆေးရုံသို့ပို့ကာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေစောင့်နေပြီး အနှိပ်သည်အမျိုးသားကိုမူ ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ လာမည့် ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့မှာ အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Credit: POPOLAY # Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ # အသကျ…
KIA က ရွာသားဟန်​​ဆောင်​ပီး ​ရောက်​မလာဖို့လည်း တပ်မတော်ဘက်က ​သေချာ သတိထား​နေရ
စစ်​​ဘေး​ရှောင်​ ​နေရတဲ့ အမှန်​တကယ်​ ရွာသားစစ်​စစ်​ ​တွေကို ပြန်​လည်​လက်​ခံ​နေပါဘီ သူတို့ ပစ္စည်း ​တွေထဲက Kia အဖွဲ့ မီးရှို့ဖျက်​ဆီးသွားတာမှ အပ ကျန်​ ပစ္စည်း ​တွေကို မ​ပျောက်​မပျက်​ရ​အောင်​ တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်း ထား​ကြောင်းသိရှိရသည်​ KIA က ရွာသားဟန်​​ဆောင်​ပီး ​ရောက်​မလာဖို့လည်း တပ်မတော်ဘက်က ​သေချာ သတိထား​နေရတာ​ပေ့ါဗျာ #ရဲသီဟ စဈဘေးရှောငျ နရေတဲ့ အမှနျတကယျ ရှာသားစဈစဈ တှကေို ပွနျလညျလကျခံနပေါဘီ သူတို့ ပစ်စညျး တှထေဲက Kia အဖှဲ့ မီးရှို့ဖကျြဆီးသှားတာမှ အပ ကနျြ ပစ်စညျး တှကေို မပြောကျမပကျြရအောငျ တပျမတျောက ထိနျးသိမျး ထားကွောငျးသိရှိရသညျ KIA က ရှာသားဟနျဆောငျပီး ရောကျမလာဖို့လညျး တပျမတျောဘကျက သခြော သတိထားနရေတာပေ့ါဗြာ #ရဲသီဟ
စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းပါ ရွှေမြန်မာတို့ရေ။ ရုရှားသဘောင်္တိမ်းမှောက်မှုတွင် သေဆုံးသွားသည့်မြန်မာသဘောင်္သား ရုပ်အလောင်းများ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ရန်ကုန်- ရုရှားသင်္ဘောတိမ်းမှောက်မှုတွင် သေဆုံးသွားသည့် မြန်မာသင်္ဘောသား ရုပ်အလောင်း ၁၆ လောင်းကို ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီခွဲက စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ သေဆုံးသွားသည် သင်္ဘောသားများ၏ မိသားစုဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ သားရုပ်အလောင်းများကို သယ်ဆောင်ရန် နံနက် ၇ နာရီကတည်းက ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာသည့် ရုပ်အလောင်းများအား မြင်တွေ့သည့်အခါ ငိုကြွေးနေကြသည့် သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင်များကိုလည်းတွေ့ရသည်။ “ကျွန်တော့်သားကို သေလို့သေမှန်းတောင် မသိခဲ့ရပါဘူး။ သေပြီးလို့ လေးရက်လောက်နေမှ သိရတာပါ။ အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ ကျွန်တော့်သား မပါဘူးလို့ထင်နေတာ” ဟု မြင်းခြံမြို့မှ သေဆုံးသူသင်္ဘောသား ကိုမြင့်ဇော်ဝင်း၏ ဖခင်ဦးငွေသန်းက ပြောသည်။ “ကျွန်တော့်ညီက ပါမလာဘူးလိုလို ဖြစ်နေတာ။ အခု ပါလာတော့ တော်သေးတာပေါ့။ သူ သင်္ဘောတက်သွားတာ ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ သူ့အဖေကလည်း သင်္ဘောတက်ရင်းနဲ့ပဲ တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာ သေသွားတာပါ” ဟု သေဆုံးသူ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ကိုရာဂျေး၏အကို ကိုဇော်သူက ပြောသည်။ သယ်ဆောင်လာသော ရုပ်အလောင်း ၁၆ လောင်းကို ရန်ကုန်နာရေးကူညီမူအသင်းနှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လူမူကူညီရေးအသင်းမှကားများက လာရောက်သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ မအူပင်၊ မြင်းခြံ၊ သန်လျင်နှင့် ဒလမြို့တို့မှ သင်္ဘောသားရုပ်အလောင်း လေးလောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များတွင် သဂြိုလ်ရန် သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ကျန်ရုပ်အလောင်းများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်သာ သဂြိုလ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ သင်္ဘောသား ၁၃၂…
အံ့ဖွယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးမြို့တော်
April 20, 2018 April 20, 2018 Yoma Lan0 comment
ဘုန်းကြီးမြို့တော်ဟုနာမည်ပေးထားသော်လည်း၊ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကယ်ဒမီ၊ စာသင်တိုက်များဖြစ်ပါသည်။ လူနေအိမ်များမဟုတ် အနီရောင်တဲအိမ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတဲကျောင်းများသာဖြစ်သည်။ အဓိက မိမိတို့လေ့လာလိုသည့် ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ ပဋိဝေဒများကိုသာ လေ့လာခွင့်ရှိသည်။ အလွန်းအလွန်သာယာပြီး သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ ဓမ္မစာပေများသာကြားရပြီး ဆဲဆိုသံ ရန်ုဖြစ်သံမကြားရပါ အလွန်အေးချမ်းပြီး တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လှပါတယ်။ အလွန်အံသြစရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချန်ဒူမြို့မှ မိုင် ၃၇၀ အကွာရှိ ၊ လာရန်ဂါတောင်ကြားတွင် ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သီလရှင် အပါး(၄၀၀၀၀) လေးသောင်းကျော်သီတင်းသုံး နေထိုင်ကြပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သီလရှင်များတို့ရဲ့၊ နေထိုင်ရာနေရာနဲ့ ကျောင်းကြားတွင် လမ်းမကြီးဖြင့် စည်း ခြားထားပါတယ်။ တစ်ပါးဖြစ်သူ၊ ဂျစ်မီဖန့်ဆော့စ်က လူနေထိုင်ခြင်းမရှိသည့် တောင်ကြား၌ ၁၉၈၀ တွင်၊ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေးလံခေါင်သီ သည့် ဒေသတွင်ရှိသော်လည်း၊ လာရန်ဂါအကယ်ဒမီမှာ၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေချနယ်မြေဖြစ်လာခဲ့သည်။ သွားရောက်လိုပါက နာရီ ၂၀ ကြာ၊ ခရီးကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ သာယာလှပသည့် ထိုဒေသတွင်၊ တီဗီများကို ပိတ်ပင်ထားပြီး ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သီလရှင်များမှာ၊ ဘာသာရေးစာပေများ လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်းတို့ဖြင့် ကောင်းကျိုးရရှိရန် နေထိုင်ကြသည်။ သီးခြားစီခွဲခြားထားသည့် စာသင်ခန်းများတွင်၊ မန်ဒရင်းတရုတ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး စာသင်ခန်း ကျယ်ကြီးများတွင်၊ တိဘတ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားလျက် ရှိသည်။ အရှင်ပညာသီဟ (မကျည်းမြိုင်) အံ့ဖှယျ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ဗုဒ်ဓဘာသာဘုနျးကွီးမွို့တျော ဘုနျးကွီးမွို့တျောဟုနာမညျပေးထားသျောလညျး၊ တကယျတော့…
သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန် တန်ရာဖြစ်ကြတာပါ လို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်အများဆုံး ဘောလုံသမားဖြစ်တဲ့ အောင်သူရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူဖြစ်ကြတာဟာ သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တော်ရာ တန်ရာဖြစ်ကြတာပါ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အောင်သူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်တာဟာ ဂုဏ်မက်လို့ ဖြစ်တာလို့ အပြောခံနေရတာကြောင့် သူမက ရင်ဖွင့်လိုက်တာပါ။ ဒီနေ့ ဧပရယ်လ ၂ဝ ရက် အစောပိုင်းကပဲ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မသာ လမ်းတစ်နေရာမှာ အကြော်ရောင်းနေသော မိန်းကလေး ဖြစ်နေခဲ့လျှင်…….? ကျွန်မသာ အုတ်နီခဲလေးသယ်ပြီး အသက်မွေးကြောင်း ပြုနေရတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့လျှင် ………..? ကျွန်မသာ တစ်အိမ်ဝင် တစ်အိမ်ထွက် အဝတ်လိုက်လျှော်ပြီး အသက်မွေးနေရသော မိန်းကလေးဖြစ်နေခဲ့လျှင် ……….? ဟုတ်ကဲ့ တစ်ခုလောက်ပြောပါရစေရှင် အရာရာဟာ သူ့အချိန်အခါ သင့်လာတဲ့အခါ သူ့ကံပေါ်မူတည်ပြီး သူနဲ့ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရာက ဖြစ်ပေါ်လာစမြဲပါ ဒါကို တားဆီးလို့မရသလို ကြိုတင်ကြံစည်ထားလို့လည်း မရပါဘူး…… ကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့ အရာဟာလည်း ဘယ်အရာမှမမြဲပါဘူး ……….. သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန် တော်ရာ တန်ရာ ဖြစ်ချိန်တန် ဖြစ်ကြတာပါ……. တစ်ခါတစ်လေကြရင်လေ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုတာ သူ့နေရာမှာ ကိုယ်ဝင်ကြည့်မှ သိကြတာပါ လေလေးသုံးပြီး ပြောဖို့ ဝေဖန်ဖို့က အလွန်လွယ်ပါတယ် ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့သာ အင်မတန်ခက်ခဲတာပါ ……… #peekpeek မွနျမာနိုငျငံမှာ လူကွိုကျအမြားဆုံး ဘောလုံသမားဖွဈတဲ့ အောငျသူရဲ့ ခဈြသူဖွဈတဲ့…
မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးနည်း လေးဖြစ်ပါသည်။ အသဲရောင် အသားဝါ နှင့်BပိုးCပိုး ရောဂါ ရှိခံစားနေရသူများ ရေဖြင်း ရောဂါ ရရှိခံစားနေရသူများကို။ယူပြစ်သလို ပြောက်ကင်းသွားစေနိုင်သောကြောင့်စေတနာရှေ့ထားပြီးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ တခါကBပိုး Cပိုးရှိတယ်ဆိုပြီး သင်တန်း တက်ခွင့်မရခဲ့သော သင်တန်း သား တယောက်ကိုသင်တန်းမှတက်ခွင့်ရပ်ဆိုင်း ခံ ခဲ့ရပါတယ်။ထိုသူငယ်ဟာအလွန်တရာ စိတ်ဓါတ် တွေကျဆင်းပြီးဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေ တဦးက ပေဖူး ကိုသုံးခွက်တခွက်တင် ကြိုသောက်လျှင်ပြောက်ကြောင်းပြောပြသဖြင့် ပေဖူးကို ၁၅ရက်မျှ ကြိုသောက်ခဲ့ရပြီးပြန်လည်ဆေးစစ်ကြည့်တော့ လုံးဝကောင်းမွန်ခဲ့ဘူး ပါသည်။ မင်းဘူးမြို့နယ်ကရွာတရွာမှာ ရေဖြင်း ဟု ခေါ်သော ရောဂါဖြစ်နေသူ တဦးဟာ ဆေးရုံ မှလက်လွှတ်ပြီးအဆင်းခိုင်းသောကြောင့် အိမ်မှာဘဲသေမည့် ရက်ကို စောင့် နေချိန်မှာ တော့ မိတ်ဆွေ တဦး၏ ပြောပြချက် အရပေ ဖူးကို သုံးခွက်တခွက်တင် ကြိုသောက်ခဲ့ရာတနေ့တခြား ဗိုက်ကြီးလဲလျှော့ကျပြီ တလအကြာမှာလုံးဝကောင်းမွန်ပြောက်က်ကင်းသွား ပါတယ်။ ထို့အတူ ၎င်း ရောဂါ နှင့် အလားတူ တဦးလည်း ပေဖူးကိုပြုတ်သောက်သဖြင့်သေတွင်းမှ လွတ်ခဲ့ဘူးသဖြင့်အလား တူခံစားနေကြရသောသူများ လွယ်ကူစွာပြောက်ကင်းစေချင်သော စေတနာဖြင့် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ Credit: ဦးဘိုလေး # Unicode Version ဖြင့် ဖတ်ပါ # မွနျမာ့နညျး မွနျမာ့ဟနျဖွငျ့အသုံးပွုနိုငျသော ဆေးနညျး လေးဖွဈပါသညျ။ အသဲရောငျ အသားဝါ နှငျ့BပိုးCပိုး ရောဂါ ရှိခံစားနရေသူမြား ရဖွေငျး ရောဂါ ရရှိခံစားနရေသူမြားကို။ယူပွဈသလို ပွောကျကငျးသှားစနေိုငျသောကွောငျ့စတေနာရှထေ့ားပွီးတငျပွလိုကျပါတယျ။…